နားထောင်တဲ့သူတိုင်း မျက်ရည်ဝဲသွားလောက်အောင် ရင်ဘတ်ချင်းထပ်တူကျစေမဲ့ သီချင်းလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေလာတဲ့ R ဇာနည် – Cele Top Stars
နားထောင်တဲ့သူတိုင်း မျက်ရည်ဝဲသွားလောက်အောင် ရင်ဘတ်ချင်းထပ်တူကျစေမဲ့ သီချင်းလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေလာတဲ့ R ဇာနည်
December 22, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် အာဇာနည်လို့ဆိုလိုက်ရင်တော့အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ၁၀ နှစ်မကရပ်တည်လာခဲ့တဲ့သူဆိုရင်တော့ မသိသူမရှိလောက်ပါဘူးနော်.. အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့သီဆိုတတ်သူ ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အားပေးကြမ်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. အာဇာနည်ကတော့ သားလေး ၂ ယောက်နဲ့အတူ သမီးလေး တစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် သာယာတဲ့မိသားစုဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်…..။
အာဇာနည်ကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်း ပြည်သူနဲ့အတူတစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် မိသားစုကိုပါ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ခေါ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှတော့ R ဇာနည်က ”နောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ် ”ဆိုတဲ့သီချင်းကို ဒီဇင်ဘာ (၁၀) ရက်နေ့ အသံတိတ်သပိတ် မှာ ဖြန့်ချီခဲ့ ပါတယ်…..။
ဒီတခေါက်မှာတော့ ”ပြန်လာမယ်မေမေ” ဆိုတဲ့သီချင်း ကို တော်လှန်ရေး အတွက်ပေးဆပ်ရင်း အိမ်နဲ့ဝေးနေကြတဲ့ သူရဲကောင်းအားလုံးအတွက် ခရစ္စမတ်အမှီ ခွန်အားပေးလိုက်ပါတယ်။ ” ဆိုပြီး စာသားလေးနဲ့အတူ သီချင်းကိုတင်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်…. ပရိသတ်ကြီးလည်း R ဇာနည် တို့လို လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်ရှိနေတဲ့ သူတွေအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းစကား‌လေး ရေးပေးခဲ့ပါအုံးနော်….။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော အာဇာနညျလို့ဆိုလိုကျရငျတော့အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ ၁၀ နှဈမကရပျတညျလာခဲ့တဲ့သူဆိုရငျတော့ မသိသူမရှိလောကျပါဘူးနျော.. အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့သီဆိုတတျသူ ဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ အားပေးကွမျးနကွေတာ ဖွဈပါတယျနျော.. အာဇာနညျကတော့ သားလေး ၂ ယောကျနဲ့အတူ သမီးလေး တဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူလညျး ဖွဈပါတယျနျော…..။
အာဇာနညျကတော့ မွနျမာပွညျရဲ့လကျရှိအခွအေနမှောလညျး ပွညျသူနဲ့အတူတဈသားတညျးရပျတညျခဲ့သူဖွဈတာကွောငျ့ မိသားစုကိုပါ လှတျမွောကျနယျမွကေို ချေါသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော.. ဒီနလေ့ေးမှတော့ R ဇာနညျက ”နောကျဆုံးဖွဈရမယျ ”ဆိုတဲ့သီခငျြးကို ဒီဇငျဘာ (၁၀) ရကျနေ့ အသံတိတျသပိတျ မှာ ဖွနျ့ခြီခဲ့ ပါတယျ…..။
ဒီတခေါကျမှာတော့ ”ပွနျလာမယျမမေေ” ဆိုတဲ့သီခငျြး ကို တျောလှနျရေး အတှကျပေးဆပျရငျး အိမျနဲ့ဝေးနကွေတဲ့ သူရဲကောငျးအားလုံးအတှကျ ခရစ်စမတျအမှီ ခှနျအားပေးလိုကျပါတယျ။ ” ဆိုပွီး စာသားလေးနဲ့အတူ သီခငျြးကိုတငျပေးလာခဲ့တာဖွဈပါတယျနျော…. ပရိသတျကွီးလညျး R ဇာနညျ တို့လို လှတျမွောကျနယျမွရေောကျရှိနတေဲ့ သူတှအေားလုံးအတှကျ ဆုတောငျးစကား‌လေး ရေးပေးခဲ့ပါအုံးနျော….။
ကလေးနှစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း အပျိုလေးတစ်ယောက်လိုလှသေးကြောင်း ဗီဒီယိုလေးနဲ့ သက်သေပြလိုက်တဲ့ မိုးယုစံ
တစ်ချိန်ကပရိသတ်တွေ အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ကြတဲ့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်ဇင်မာဦးရဲ့ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း